नेपाली सम्प्रभुतामा प्रश्न उठाउने पिट्‍ठु पत्रकार - Online Majdoor
आनन्द स्वरुप बर्मा १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०९:३८
हिजोको कुरा हो । टीभीको स्क्रिनमा ठुलो अक्षरमा आउँछ– ‘भारतका खाओगी, चीनका गाना गाओगी ?’ यसपछि सुरू हुन्छ अभिनेत्री मनीषा कोइरालामाथि तीन उद्घोषकको आक्रमण, जो हरेक दिन एबीपि न्यूजमा ‘नमस्ते भारत’ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छन् । सन्दर्भ थियो कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साको । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको ट्वीटमा मनीषा कोइरालाको ट्वीट, जसमा उनले लेखेकी थिइन्, “हाम्रो सानो राष्ट्रको गरिमा कायम राखेकोमा धन्यवाद । तीन महान् देशबीच हामी शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक छलफलको आशा गछौँ ।” केवल यति नै । अत्यन्त शालीन भाषामा एक नागरिकले आफ्नो देशको सम्प्रभुता र आत्मसम्मानमा यो टिप्पणी गरेकी हुन् । उद्घोषक विकास भदौरिया भन्छन्, “कसरी भारतमा बसेर मनीषाले अथाह पैसा र प्रसिद्धि कमाइन् । तर, आज उनी भारतविरुद्ध चीनको साथ उभिएकी छन् । खडा भएकी छन् ।”
भदौरियाले भने, ‘भारतको खान्छौ र चीनको गीत गाउँछौ ?’ यी समाचार च्यानलको बौद्धिक कङ्गाललता देखेर हैरान हुन्छ ।
के अब कुनै पढे लेखेका सम्पादकजस्ता व्यक्तिको अस्तित्व यी च्यानलमा छैन ? के भीडले नै अब सबै तयार गर्दै छ कि के प्रसारण गर्ने, के नगर्ने ? या हरेक च्यानलमा जो गनिएका पढेलेखेका व्यक्ति छन्, उनीहरू चुप रहन अभिशप्त छन् ? यी सवालको जवाफ मेरा एक युवा पत्रकार मित्रले बताए कि वास्तवमा मोदी सरकारमा आएपछि र खासगरी जेएनयू प्रकरणपछि ‘राष्ट्रभक्त’ र ‘राष्ट्रद्रोही’ वाला जुन एउटा ‘लार्जर न्यारेटिभ’ बन्यो, त्यसमा हरेक समाचारलाई फिट गरेको परिणाम यो हो ।
खबरलाई यसरी प्रसारण गर्दा संस्थापन पक्षधर भइरहन सकिन्छ भन्ने एउटा मापदण्ड बनेको छ । जसलाई सत्यतथ्यमा रहेर साँच्चैको पत्रकारिता गर्नुछ, उनीहरूले यस्ता च्यानलबाहेक अन्यत्र कतै कुरा राखून् । दिउँसो हुँदै गर्दा यो समाचारले बहसको रूप लिने तयारी गर्दै थियो, जो आमरूपमा च्यानलको चलन भइसकेको छ । अब खबर भन्ने बागडोर च्यानलका सबैभन्दा समझदार र अनुभवी समाचार प्रस्तोता रोमाना ईसार खानको थियो, तर रोमानाले त्यसै गरिन् जुन बिहान देखिएको थियो । रोमानालाई पनि मनीषा कोइरालालाई भारतले सबै दियो तर आज उनी चीनको पक्षमा उभिएको जस्तो लागिरहेको थियो ।
एउटा समझदार समाचार प्रस्तोता कसरी सत्ताको दबाबमा जान–अञ्जानमा मूर्खताको दलदलमा भासिँदै जान्छ भन्ने शानदार उदाहरण हुन् रोमाना । रोमानाको प्रश्न थियो कि – ‘यस्तो के भयो कि ७० वर्षमा पहिलो पटक नेपालले भारतसँग आँखा जुधाउने कोसिस किन गरिरहेको छ ? यो वाक्य कुनै पत्रकारको नभएर सानो छिमेकी देशको सम्प्रभुतामाथि औँला उठाइरहेका शासक वर्गका कुनै सदस्यको हुनसक्छ । यस कार्यक्रममा दुई विशेषज्ञ थिए– भाजपाका प्रेमशङ्कर शुक्ला र सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल जी.डी. बख्शी । दुवैलाई नक्साबारे पूरा मामला के हो भन्नेबारेमा थाहा नै थिएन । तर, चीन र पाकिस्तानविरुद्ध त विनाकुनै तयारी, कुनै पनि समयमा बोल्न सकिन्छ । दुवैले चीनको षड्यन्त्रबारे प्रकाश पारे र जनरल बख्शीले यो कुराका लागि अघिल्लो सरकारलाई दोष दिए । उनले भने, “अघिल्लो सरकारले जेएनयूबाट वामपन्थी पठाएर नेपालमा माओवादीलाई बलियो बनाउँदाको परिणाम आज भारतले भोग्नुपरेको छ ।”
उनले ‘यस ग्रहको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रलाई बचाउन गुहार लगाउँदै आफ्नो बौद्धिकतालाई खुलासा गरे । अर्का विद्वान प्रेमशङ्कर शुक्लाले नेपालका माओवादी नेता प्रचण्डलाई भारतले जेएनयूमा पढाएको र पालनपोषण गरेको बताए । प्रचण्डको कहिल्यै जेएनयूसँग कुनै सरोकार थिएन । बाबुराम भट्टराईले जेएनयूबाट विद्यावारिधि गरेका थिए । समाचार प्रस्तोता रोमानालाई यिनीहरूलाई लामो समयसम्म स्क्रिनमा राख्नु ठीक छैन भन्ने लागिसकेको थियो । त्यसैले ‘तपाईंहरूको आरोपको जवाफ दिन यहाँ काङ्ग्रेसका कोही छैनन्’ भन्दै बहस समापन गरिन् ।
कुनै पनि च्यानलमा तर्कपूर्ण ढङ्गले कालापानी, लिपुलेक विवाद वस्तुतः के हो र दवै देशबाट कमजोरी कहाँ भयो र अवस्था यति तनावपूर्ण बन्यो भन्नेबारे बहस देख्न पाइएन । किन समय छँदै वार्ताद्वारा यसको कुनै हल खोज्न सकिएन ? नेपालका दुई मात्र छिमेकी छन् – भारत र चीन । भारतसँग जबरजस्ती सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक निकटता हुनुका साथै नेपाल आज किन चीनसँग नजिक देखिएको छ ? के कसैले यसबारेमा कसैले चर्चा गरियो ? चीनको इसारामा नेपालले नयाँ नक्सा तयार गरेको तर्क गर्नु घटनाको वास्तविकतामा नगएर अन्यत्र मोडिनु हो ।
कालापानीमाथि भारतले र लिपुलेकमा चीनले उसलाई डसेको छ । यसलाई सम्झ शासक र उनका ‘पिट्‍ठु पत्रकार’ सानो राष्ट्र, सानो सम्प्रभुता भन्ने औपनिवेशिक मानसिकताबाट मुक्त होऊ । सम्प्रभुता कुनै देशको भौगोलिक आकार र आर्थिक हैसियतबाट निर्धारण हुँदैन । जबसम्म यसलाई सम्झँदैनौँ, छिमेकीको घृणा पाइनै रहनेछौँ र यी सबैका लागि कहिले चीनमाथि त कहिले पाकिस्तानविरुद्ध नाङ्लो ठटाइरहेका हुनेछौँ ।
(भारतका वरिष्ठ पत्रकार आनन्द स्वरुप बर्माले नेपालले चीनको इसारामा नक्सा जारी गरेको भन्ने भारतीय सञ्चारमाध्यममा भएका प्रचारबाजीबारे जनपथडटकममा व्यक्त गरेको प्रतिक्रियाको नेपाली अनुवाद)